Author Topic: Today's News from Nepal (आजको समाचार) (Read 12757 times)
« Reply #50 on: April 20, 2015, 07:42:08 AM »
आईएनजीओबाट डलर खानेहरूले सुदूरपश्चिम टुक्र्याउन चाहे
धनगढी वैशाख ७ - राज्य पुनर्संरचना गर्दा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई पहाडी प्रदेशसँग मिलाउने कि तराई प्रदेशसँग मिलाउने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला यस क्षेत्रबाट केन्द्रीय राजनीतिमा दखल राख्ने नेताहरूले सुदूरपश्चिमाञ्चललाई टुक्र्याउन नहुने र केन्द्र शासित पनि राख्न नहुने बताएका छन्।
महिलाबाट आक्रान्त पुरुष
जनकपुरधाम वैशाख ७ - यौन सम्पर्क गर्न नमानेपछि धनुषाको एकराही-४ निवासी ३५ वर्षीया उषादेवी पासवान (नाम परिवर्तन) ले गत चैत २५ गते राति आफ्नै भतिजाको गुप्तांग धारिलो हतियारले काटिदिइन्। दिलीपको उपचार जनकपुरमा सम्भव भएन। उनको उपचार धरानमा भइरहेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडाैं वैशाख ७ - अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने एक सडक आयोजनालाई आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी छँदा अर्थ मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट पठाएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
युवतीलाई जिस्क्याएको निहुँमा हत्या
काठमाडौं, वैशाख ७ - पसलमा सामान किन्दै गरेका युवतीलाई जिस्क्याएको आरोपमा राजधानीमा एक युवकको ज्यान लिनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एमआरपी तीन दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन
काठमाडौं, वैशाख ७ - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) पुगेको तीन दिन भित्र सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । जिल्लामा सर्वसाधारणले समयमै पासपोर्ट नपाएको गुनासो आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अनियमितताको आरोपित नै सुशासन विज्ञ
काठमाडौं, वैशाख ७ - स्थानीय निकायमा सुशासन र जवाफदेहिता विकास गर्न सञ्चालित परियोजनामा विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको भेटिएको छ ।
जाजरकोटमा स्वास्थ्थ निकायको चरम लापरबाही
जाजरकोट, वैशाख ७ - तीनसातादेखि फैलिएको मौसमी रुघाखोकी र स्वाइन फ्लुको महामारी नियन्त्रणमा ढिलाई भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रक्रिया अगाडि बढाइए एमाओवादीले विरोध गर्ने
काठमाडौं, वैशाख ७ - एमाओवादीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइए त्यसको विरोध गर्ने जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
संघीयताबाहेकमा प्रक्रिया अघि बढाउने
काठमाडौ, वैशाख ७ - प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले केही दिनभित्रै सहमति नभए संघीयताबाहेक यसअघि समझदारी भइसकेका विषय समेटेर संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । आउँदो संविधानसभाको बैठकअगावै सहमति गर्न अधिकतम पहल गर्ने र त्यतिन्जेल पनि कुरा नमिले प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
पियनकै भरमा महामारीका गाउँ
भगवती माविकी छात्रा सुस्मितालाई परिवारले उपचारनिम्ति अर्छानीकै स्वास्थ्यचौकी पुर्‍यायो। तर, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी कोही थिएनन्। चौकी इन्चार्ज स्वास्थ्य सहायक पुन्जन रावत, अहेव गंगाराम आचार्य र अनमी हरिकला शाही बिदामा थिए भने अहेव कृष्णबहादुर रोकाय तालिम काजमा गएका थिए। अनमी आरति यादव पनि काजमा वीरगन्ज गएकी थिइन्।
« Reply #51 on: April 22, 2015, 02:52:57 PM »
यात्रुमाथि बस व्यवसायीको अर्को ठगी
काठमाडौं वैशाख ९ - तोकिएको दरभन्दा यात्रुबाट बढी रकम असुल गरेर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालकले यात्रुलाई टिकट उपलब्ध नगराएर अर्को ठगी गरेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ । उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले लामो समयदेखि यात्रुलाई टिकट उपलब्ध गराएका छैनन्। जसका कारण पीडित यात्रुले कानुनी उपचार खोज्नसमेत वञ्चित छन्।
जर्किनमा कोरेक्स बिक्री !
काठमाडौं वैशाख ९ - नेपालमा बिक्रीका लागि प्रतिबन्धित सय मिलिलिटर (एमएल) को कोरेक्स (खोकीको औषधि) उपत्यकामा धमाधम बिक्री भइरहेको छ। लागूऔषध कारोबारीले दुर्व्‍यसनीलाई प्रतिसय एमएलको पाँच सयदेखि सात सयसम्ममा कोरेक्स बेच्दै आएका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
जाजरकोटको संक्रमण सुर्खेतमा पनि
सुर्खेत वैशाख ९ - जाजरकोटमा एक महिनायता फैलिएको संक्रमणले अन्य छिमेकी जिल्लालाई समेत आक्रान्त पार्न थालेको छ। जाजरकोटमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी फैलिएको संक्रमण छिमेकी जिल्ला जुम्ला र कालीकोटमा पनि सर्दै गएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
संक्रमित क्षेत्रमा चिकित्सक पुर्‍याउन कठिन
जाजरकोट वैशाख ९ - दुर्गम र पटकपटक मौसममा भइरने फेरबदलले जाजरकोटका संक्रमण प्रभावित क्षेत्रमा उपचारका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न कठिनाइ भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । एउटा गाविसबाट अर्को गाविसमा पुग्न पैदल कम्तीमा दुई दिन लाग्ने भएपछि सरकारले हेलिकोप्टरबाट चिकित्सक पुर्‍याउन थालेको थियो।
काठमाडौं, वैशाख ९ - नेपालको हार्डवेयर र सफ्टवेयर सर्वेक्षणसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन राजधानीमा सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक अभियानमा समाचार छ । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल क्यान फेडेरेसनले आफ्नो वेभ पार्टल र सो प्रतिवेदन एकैपटक सार्वजनिक गरेको हो ।
काँडाघारीमा प्रहरीद्वारा किशोरी बलात्कृत
काठमाडौं, वैशाख ९ - राजधानीमा सुस्त मनस्थितिकी एक किशोरी प्रहरीद्धारा बलात्कृत भएकी छिन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । काँडाघारी बस्ने १४ वर्षीया किशोरीलाई प्रहरी जवान रामधीर महरले बलात्कार गरेका हुन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वीगेटमा आइतबार साँझ ६ बजेसम्म ड्युटी गरेका महरले राति साढे ७ बजे किशोरीलाई बलात्कार गरेका हुन् ।
विवाह गरेकालाई भर्ना नलिने
रुकुम वैशाख ९ - गाउँमा बढ्दै गएको बालविवाह रोक्न एक विद्यालयले अभियान संचालन गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । पोखरा १ स्थित जनता उच्च माविले विवाह गरेका विद्यार्थीको भर्ना नगर्ने अभियान सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री विदेश यात्रामा निस्किएपछि संवाद अघि बढेन
काठमाडौ, वैशाख ९ - दलीय समझदारी निर्माणमा मुख्य अग्रसरता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै झण्डै १० दिन लामो विदेश यात्रामा निस्किएपछि संविधानसभाको बिहीबारको बैठक पनि मुल कार्यसूची विहीन हुने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
निगम खर्चमा मन्त्री डुलेकाे डुल्यै
काठमाडौ, वैशाख ९ - पर्यटन मन्त्री बनेको आठ महिना नवित्दै दिपकचन्द्र अमात्य नेपाल बायुसेवा निगमको खर्चमामात्र चार पटक भ्रमणमा निस्किसकेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकायहरु प्रमुख विहीन भएर 'बेवारिसे' तालमा चलिरहेका बेला आमात्य पछिल्लो पटक हङकङ उडेका हुन् । एक महिनाभित्र निगमको खर्चमा उनले हङकङ उडान गरेको यो दोस्रो पटक हो ।
किन बस्दैन मधेसी मोर्चा बैठक
काठमाडौ, वैशाख ९ - मधेसी मोर्चा संयोजक रहेका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको निर्देशनमा महासचिव मनिषकुमार सुमनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक डाके, फागुन २८ मा । मोर्चा संयोजन समितिमा बसेका आठै दलका अध्यक्षसहित २४ नेताले एसएमएसमा जवाफ फर्काए- 'थ्यांक्स । हामी आउँछौं ।' कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एउटै मुद्दामा तीन पुस्ता
ताप्लेजुङ वैशाख ८ - ताप्लेजुङ नगरपालिका-४ का भट्टराई परिवार १९५० सालदेखि आफ्नो नाममा रहेको करिब सात रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न नपाएर अदालतमा धाइरहेको छ। परिवारको तीन पुस्ता अदालती मुद्दामै बितिसकेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अख्तियारको छापा
काठमाडौं, वैशाख ८ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार स्वास्थ्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकायमा छापा मारेर विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । औषधि भण्डारमा समेत आयोगले छापा मारेको छ ।
१० नयाँ न्यायाधीश थप नियुक्त गर्ने तयारी
काठमाडौं वैशाख ८ - न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी र अस्थायी गरी दश नयाँ न्यायाधीश थप नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।सर्वोच्चमा रिक्त रहेका तीन स्थायी र सात अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी परिषदले गरेको हो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
जाजरकोटमा धामीको शरण
सुर्खेत वैशाख ८ - जाजरकोटमा फैलिएको महामारीबाट जोगिन स्थानीय बासिन्दाले देउतालाई भाकल गर्न थालेका छन्। महामारीबाट एक दर्जन गाविस प्रभावित भएका छन् भने सोमबारसम्म २५ जनाको ज्यान गएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
चिनियाँ जहाज उडाऊँ कि थन्क्याऊँ
काठमाडौं, वैशाख ८ - बारम्बारको ग्राउन्डेड, मर्मत खर्च अत्यधिक, बिमा शुल्क अस्वभाविक र आम्दानीचाहिँ न्यून हुँदै गएपछि सेतो हात्ती बनेको चिनियाँ जहाजबारे सोमबार निगमका कर्पोरेट निर्देशक रामहरि शर्माले भने, अब जहाज उडाउने कि ग्राउन्डेड गर्नुपर्ने हो मन्त्रालयले बाटो देखाईदिनुपर्‍याे । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सीधै बजेट अधिवेशन
काठमाडौं, वैशाख ८ - सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा चासो नदेखाएर धमाधम बजेटको तयारीमा जुटेपछि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय पनि सीधै बजेट अधिवेशनमा जाने मनस्थितिमा पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
डलर दिने लोभमा पारी १३ लाख ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौ, वैशाख - सस्तोमा डलर दिने लोभमा पारी १३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका रेशम तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अख्तियार लोकमानद्वारा आफूखुसी नियुक्ति
काठमाडौं, वैशाख ८ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनी व्यवस्थाबिनै प्रमुख सल्लाहकारसहित ठूलो संख्यामा विज्ञ नियुक्त गरी लामो समयदेखि तलवसुविधा दिँदै आएको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
गतिरोध हट्ने संकेत, विवाद सुल्झाउने जिम्मा ३ नेतालाई
काठमाडौं, वैशाख ८ - कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संघीयता बारेको विवाद सुल्झाउन तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #52 on: April 23, 2015, 07:00:04 AM »
३६ वर्षीयाले तिम्ल्याहा जन्माइन्
धरान, वैशाख १० - इलामकी ३६ वर्षीया भीमकुमारी लिम्बूले मंगलबार तिम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । तिम्ल्याहामा २ छोरी र १ छोरा छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
रोग पत्ता लगाउन सरकार असफल
जाजरकोट वैशाख १० - तीन सातादेखि जाजरकोटका गाउँगाउँमा फैलिएको रोग सरकारले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। रोग निदान नहुँदा जुनसुकै समस्यामा पनि स्वाइन फ्लु भन्दै गाउँले आत्तिएर स्वास्थ्यजाँचका लागि शिविर जाने गरेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मलेसियाका ५२ कम्पनीलाई कामदार लैजान रोक
काठमाडौं, वैशाख १० - ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको मलेसियाका ५२ कम्पनीमाथिको प्रतिबन्धले नेपालको विप्रेषण आव्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
ब्रेकफेल हुँदा भारतीय बस दुर्घटना भएको पुष्टी
झ्याप्लेखोला (धादिङ) , वैशाख १० - भारतीय तीर्थयात्री बोकेको दुईतले बस बुधबार बिहान ब्रेकफेलका कारण दुर्घटनाग्रस्त हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेटबाट पैसा चोर्ने पक्राउ
दाङ, वैशाख १० - इन्टरनेट मार्फत बैंक खाताको रकम चोरीमा सम्लग्न गिरोह खोजी गर्दे आएको प्रहरीले एक युवकलाइ पक्राउ गरेको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ । गिरोहका मुख्य नाइकेुको आरोपमादाङका एक युवकलाई पक्राउ गरेको हो ।
छोरीको विवाहमा लालपुर्जा नै दाइजो
महोत्तरी, वैशाख १० - मुलुकको अंशबन्डासम्बन्धी कानुनमा छोरालाई छोरीसरह सम्पत्तिको अधिकार दिइएको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन नहदाँ अहिलेसम्म विवाह गरेर घर जाने महिलाले माइतीको सम्पत्ति पाउन सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । विवाहमा दाइजोका रुपमा नगद, गरगहना, लत्ताकपडा ,भाडाकुँडा नदिए।
जनकपुर, वैशाख १० - सञ्चारकर्मी उमा सिंहको हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार उमेश यादवलाई धनुषा जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । जिल्ला न्यायाधीश पुण्यप्रसाद पाठकको इजलासले बुधबार सजाय तोकेको हो ।
मत्स्येन्द्रनाथको रथको पाङ्ग्रा फस्यो
ललितपुर, वैशाख १० - रातो मत्स्येन्द्रनाथ को रथ को पाङ्ग्रा ढलमा फसेकोले बुधवार जात्रा रोकिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सद्‌भावना एकता टर्‍यो
काठमाडौं, वैशाख १० - सद्‌भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एकीकरणका लागि अरु घटकलाई पत्र लेखे पनि 'सद्‌भावना परिवार एकता' तत्काललाई टरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्‌भावना पार्टीको बबरमहलमा शनिबार सकिएको संघीय कार्यसमितिको तीनदिने बैठकले पार्टी एकताका लागि सकारात्मक रहेको निर्णय सार्वजनिक गरे पनि आन्तरिक रुपमा एकता नगर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
« Reply #53 on: May 07, 2015, 08:42:57 AM »
भूकम्पले नक्सांकन नै परिवर्तन
काठमाडौं वैशाख २४ - भूकम्पले मध्य, पूर्व र पश्चिमाञ्चलका विभिन्न क्षेत्रमा राखिएका जग्गा नापजाँचका सन्तुलन बिन्दुहरू ध्वस्त हुँदा मुलुककै नक्सांकनको दिशा परिवर्तन हुने भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं, वैशाख २४ - वैशाख १२ मा आएको भूकम्पपछि राजधानीमा डेरा हाकाहार भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । भूकम्पले नचर्किएका घरमा भाडा शतप्रतिशतसम्म बढाइएको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा मात्र ३४ हजार ४१ वटा घर भत्किएका छन् । १ लाख ३६ हजार ५ सय ४५ विस्थापित भएका छन् ।
आफन्तको निधनले ज्ञानेन्द्र फर्कन ढिलो
काठमाडौं, वैशाख २४ - पूर्वरानी कोमल शाहको उपचारका क्रममा दिल्लीस्थित आरेक अस्पतालमा उनका लाजु सुरजशमशेर राणाको निधन भएपछि पूर्वराना ज्ञानेन्द्र शाहको स्वदेश आगमन केही दिन पर सकेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
किरण सिटौला मेरिल्याण्ड राज्यको उपमेयर
न्युयोर्क, वैशाख २४ - नेपाली मूलका किरण सिटौला अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको इण्डियन हेड सिटीको उपमेयरमा विजयी भएका छन् । अमेरिकामा नेपाली मूलका ब्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएको यो पहिलो घटना हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौ, वैशाख २४ - धेरै वर्षदेखी भुकम्पविदले राजधानीमा विनासकारी भुकम्प आइहाले एक्लो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रन-वे चर्किने र नेपालको बाँकि विश्वबाट हवाई सम्र्पक विच्छेद हुने अनुमान गर्दै आइरहेका थिए । तीन वर्षयताका वर्खायाममा रन-वेको पिच भत्किन थालेपछी भुकम्पविदहरुको अनुमान यथार्थमा बदलिने अधिकाशंले सोचेका थिए । तर, दैवसंयोग यसपटकको महाभुकम्पमा नेपाललाई बाँकी विश्वसँग हवाई माध्यमबाट जोड्ने धावनमार्गमा धन्न केही भएन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ
गोकर्ण, वैशाख २४ - ‘म बिरामी भइराख्छु, नर्स बन्नुपर्छ, आमा भन्नुहुन्थ्यो’ गोकर्णस्थित मन्दिर परिसरमा किरिया बसेकी सुस्मिता पण्डितले आमाको भनाइलाई स्मरण गर्दै भनिन्, ‘दिदी बहिनी नर्सिङ अध्ययन गर्नेछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काठामाडौं ,वैशाख २४ - दातृ निकायले सरकारी संयन्त्र अस्वीकार गरी सिधै आफू या निकटका अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय गैससबाट भूकम्प पीडित सहायता खर्च गर्ने रणनीति लिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं, वैशाख २४ - भूकम्पपछिका १२ दिनमा दातृ निकायले झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भने २६ करोड १० लाख मात्रै जम्मा भएको छ । रकम दाखिला गर्ने मुलुक पनि नियमित र ठूला दाता होइनन् ।
घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमै ऋण
काठमाडौं, वैशाख २४ - - भूकम्पबाट घर ध्वस्त–क्षतिग्रस्त भएकालाई नयाँ निर्माण गर्न २ प्रतिशत ब्याजमै बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकको बुधबारको निर्णयअनुसार काठमाडौंभित्र २५ लाख रुपैयाँ र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रति ध्वस्त–क्षतिग्रस्त घरलाई यस्तो ऋण दिइने भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
पुरिएका पशुको वास्तै छैन
काठमाडौं वैशाख २३ - महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका साढे सात हजारको शव उद्धारकर्मीले निकालिसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांश शव आफन्तलाई जिम्मा लगाएर अन्त्येष्टिसमेत भइसक्यो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ । महामारी र रोग निम्तिन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै भग्नावशेषमा पुरिएका बाँकीको खोजी तीव्र छ। भूकम्पमा मान्छेसँगै पुरिएका घरपालुवा जनावर तथा पशुपन्छीको उद्धार र व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन।
अर्काको आसमा मात्रै कति बस्नु
धादिङ वैशाख २३ - सन्तबहादुर तामाङ मंगलबार टन्टलापुर घाममा मकैबारी मासेर टहरा बनाउँदै थिए । परिवारका अन्य सदस्य भत्केको घरले पुरेका पुराना जस्ता बटुल्दै थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । ‘भूकम्प गएलगत्तै सहयोग पाइएन । संस्थाले दिएको त्रिपालले अन्नसम्म छोप्न काम लाग्ला । मान्छे र पशुवस्तुले ओत लाग्नै पर्‍याे । अर्काको आसमा मात्रै कति बस्नु ?’, उनले भने, ‘त्यही भनेर हामी आफ्नो टहरा आफैं बनाउन जुट्यौं ।’
३४ मुलुकका उद्धार टोलीले 'फिल्ड' छाडे
काठमाडौं वैशाख २३ - महाभूकम्पपछि उद्धारका लागि आएका विभिन्न ३४ मुलुकका उद्धार टोलीले 'फिल्ड' छाडेका छन्। सरकारले 'सर्च एन्ड रेस्क्यु'को काम सकिएको भन्दै फर्किन आग्रह गरेपछि उनीहरूले काम छाडेका हुन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
तातोपानी जोड्ने प्रयास जारी
सिन्धुपाल्चोक वैशाख २३ - सिन्धुपाल्चोक वैशाख २३ । महाभूकम्पले सडक, संचार अबरुद्ध गरेपछि बेखबर बनेको उत्तरी तातोपानी नाकासँग सम्पर्क जोड्न नेपाल र चीनका टोलीले काम थालेका छन् । नागरिक दैनिकमा समाचार छ । राजमार्ग नखुलाई शव उत्खनन्, क्षति संकलन, राहत वितरण जस्ता प्रकोपका आकस्मिक कार्य असम्भव भएपछि अत्याधुनिक मेशिनरी उपकरणसहित चीन र नेपालका प्राविधिक तथा सुरक्षाकर्मी दुई तिरबाट युद्धस्तरमा जुटिरहेका छन्।
'भारतीय जहाजबाट आजित भयौं'
गोरखा वैशाख २३ - भूकम्‍पको प्रभावबारे जानकारी लिन ११ दिनपछि गोरखा आइपुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनाले भारतीय हेलिकोप्टरले गर्दा घाइतेको उद्धार तथा राहत सामग्री ढुवानी गर्न समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
राहत मिसन राख्ने कि पठाउने ?
काठमाडौं, वैशाख २३ - खोज तथा उद्धारपछिको राहत मिसन कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सरकार र सहयोग गर्न आएका विदेशी मुलुकबीच खिचातानी उत्पन्न भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
४ लाख त्रिपाल छ, पीडितले पाएनन्
काठमाडौं, वैशाख २३ - पश्चिम बंगालले पठाएको बाहेक नै भूकम्प आउनुअघि र पछि मुलुकभित्र ४ लाख त्रिपाल रहेपनि हजारौं पीडित परिवारले भने पाउन सकेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा भुकम्प आउने अघिल्लो दिनसम्म १ लाख ५५ हजार त्रिपाल आयात भएको थियो ।
माया मारेको छोरो ज्युँदै भेटिँदा‍‍‌‌..
सिन्धुपाल्चोक, वैशाख २३ - अनुहारभरि पसिनै पसिना र काखमा नानी च्यापेकी ४० वर्षीया पदमकुमारी अधिकारी हर्षित देखिन्थिन । उनी आफ्ना कुरा सुनाउन आतुर थिईन । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । उनीसँग सुनाउनुपर्ने खास कुरो पनि थियाे
बेलायतले साढे दुई अर्ब सहयोग गर्ने
काठमाडाैं वैशाख २३ - नेपालका लागि बेलायतका कार्यबाहक राजदूत जोन रन्किनले भूकम्प पीडितहरुका लागि २ करोड २८ लाख पाउण्ड करिव दुई अर्व ५३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।